माओवादी नेतृत्वले ठूलो भ्रष्टाचार गरकै हो, त्यसै छोड्न मिल्दैन – सुशील कोइराला (कांग्रेस सभापति) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
माओवादी नेतृत्वले ठूलो भ्रष्टाचार गरकै हो, त्यसै छोड्न मिल्दैन – सुशील कोइराला (कांग्रेस सभापति)
० अन्ततः तपाईले लडाकुमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई औपचारिक रुपमै उठाउनु भयो होईन ?
– यो मुद्दा मैले यसपटक मात्रै उठाएको होईन पटक–पटक मैले उठाउँदै आएको छु । सार्वजनिक सन्चारमाध्यममा, पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा पनि, लेखमा पनि पटक–पटक उठाउँदै आएको हुं । समायोजन र पुनःस्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा मैले समितिको बैठकमा यस विषयलाई भने पहिलो पटक उठाएको हुं । विशेष समितिको म्याद पनि अब अन्तिम समयमा छ । यो विषय पनि विशेष समितिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकोले मैले प्राथमिकताका साथ उठाएको हुं । शिविरहरु विशेष समितिको मातहतमा रहन्छन् । शिविरको खर्च पनि विशेष समितिले निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि र यो घटनाले शिविरभित्र पनि द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न भयो । यस्तो विषयमा विशेष समिति मौन बस्नुहुन्न, छानविन गर्नुपर्छ भनेर मैले यो कुरा उठाएको हुं ।
० माओवादीले करौडौं रुपमा भ्रष्टाचार गरेको छ भनि लगाएको आधार प्रमाण तपाईसँग छ ?
– तीन हजार लडाकु त शिविरमा मात्रै होईन, नेपालमै रहेनछन् भन्ने त प्रष्ट नै भइसकेको छ । सम्भवतः उनीहरु विदेश गएका होलान्, महिनौ दिनको सूचना गरेर आउनुभन्दा पनि उनीहरु रकम लिन आएनन् । हुँदैनभएका लडाकुहरुको नाममा महिनैपिच्छे करोडौं रुपैया माओवादी नेतृत्वले बुझ्यो । फर्जि हस्ताक्षर गरेर महिनैपिच्छे रकम लग्नु भ्रष्टाचार नभए के हो ?
० यसरी भ्रष्टाचार भइरहँदा तपाईहरु किन चुप लागेर बसेको त ?
– सेना समायोजन र पुनःस्थापनामा काम गर्ने विभिन्न समितिहरु हुन्छ । विशेष समितिलाई तुरुन्तै सबै कुरा थाहा हुँदैन । कति रुपैयां कता गयो थाहा हुँदैन । हामिले नीतिगत कुरा मात्रै हेर्छौं । पहिला थाहा भएको भए त्यो पहिला नै उठ्थ्यो । शिविरभित्रको आन्तरिक ब्यवस्थापन कमाण्डरुले गरिरहेको हुनाले सबै कुरा समयमै बाहिर आउन सम्भव पनि छैन । कुरा विगतमा उठेको पनि थियो, संसदमै कुरा उठेको थियो, सन्चारमाध्यममा कुरा उठेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु गर्ने तयारी पनि गरिसकेको थियो । तर संसद नै भंग भएको अवस्थामा यो कसले हेर्ने भनेर कुरा उठाएको हो ।
ण् यो कुरा मात्रै हुन्छ कि छानविन पनि हुन्छ ?
– कुरा मात्रै हुँदैन, छानविन पनि हुन्छ र हुनुपर्छ । सरकारको ढुकुटीबाट गएको रकम भएको हुनाले त्यसको छानविन गर्नै पर्छ । जनताको करबाट उठेको रकमबाट गएको हुनाले निष्पक्ष निकायले छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले वा न्यायीक आयोगले छानविन गर्नुपर्छ । माओवादीले छानविन गरेर हुँदैन । पहिला छानविन गरेर कति रकम भ्रष्टाचार भयो भन्ने निक्र्योल गर्ने अनि त्यसपछि कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरेर मात्रै हुँदैन । अहिलै को दोषि भनेर छानविन नगरी भन्न सकिदैन तर माओवादी दोषि छ ।
० कांग्रेसभित्रै पनि नेताहरुप्रति आशंका गर्दै सम्पत्ति छानविनको कुरा उठ्न थालिसकेको छ ?
– मन्त्री भएका, सांसद भएकाहरुले त वर्षैपिच्छे सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका छन् । औपचारिक रुपमा सरकारलाई नै बुझाएका छन् । नबुझाएकाको त पारदर्शी हुने माग जायजै हो ।
० भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग इरानमा भएको वन टु वान वार्तालाई कसरी लिनुभएको छ ?
– यो वन टु वन वार्ता हुँदैन । नर्मल्ली वार्ता हुँदा प्रतिनिधि मण्डल बस्छन् । औपचारिक वार्ता त्यो हो । कहिलेकाहीं साईडलाईन वार्ता हुन सक्छ । तर यस्ता वार्तामा पनि सहयोगीहरु राख्नुपर्छ ।
२० भाद्र २०६९, बुधबार १७:३८ मा प्रकाशित